Thu, May 24, 2018 | 15:18:49 NST
सुनसरीको प्रदेशसभाको अन्तिम मतपरिणाम : ३ ख मा नेपाली कांग्रेस विजयी
सुनसरी, मंसिर २७ – सुनसरी ३ प्रदेशसभा ख मा नेपाली कांग्रेसका अगमलाल चौधरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँले २१ हजार ४ सय २९ मत ल्याउनुभएको छ ।
गोपालमानको संसद यात्रामा ब्रेक लाग्यो, स्याङ्जा–२ मा एमालेकी पद्मकुमारी विजयी
काठमाडौं, मंसिर २७ – स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेकी पद्मकुमारी अर्यालसँग नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता गोपालमान श्रेष्ठ पराजित हुनुभएको छ । प्रतिनिधिसाभा सदस्यका लागि भएको चुनावमा क्षेत्र नम्बर २ बाट एमालेकी अर्याल ३५ हजार १ सय ४१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो ।
आफ्नै स्वकीय सचिवसँग हारे पूर्व मन्त्री
धनगढी, मंसिर २७ – नेपाली कांग्रेसबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेका पूर्व मन्त्री आफ्नै सहयोगी (पिए) सँग पराजित हुनुभएको छ । कांग्रेसबाट उम्मेदावरी दिनुभएका पूर्व शिक्षा राज्यमन्त्री मोहनसिंह राठौर आफ्नै पूर्व पिएसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनुभएको हो ।
पाँचथरमा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो
पाँचथर, मंसिर २७ – प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पाँचथरमा नेकपा एमालेले सबैभन्दी बढी मत प्राप्त गरेको छ ।
विजय गच्छदार मतान्तर बढाए, चौधरी भन्दा ५१९ मतले अघि
सुनसरी, मंसिर २७ – प्रतिनिधिसभा तर्फ सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को मात्र अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ । अहिलेसम्म कांग्रेसका विजय गच्छदार नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी भन्दा ५ सय १९ मतले अघि हुनुहुन्छ ।
चुनाव अगाडि दुईवटा टिप्पणीहरु नोट गरेको थिएँ । एक, ‘विवेकशील साझा पार्टीका मतदाता विदेशमा छन् ।’ अर्को ‘बिजुक्छेलाई प्रशंसा गर्नेहरुले मत पनि उनको पार्टीलाई दिए हुन्थ्यो ।’
सुनसरी, मंसिर २६– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मतगणना सार्वजनिक भैसकेको छ । धेरैतिर विजयी र्‍याली निस्किसकेको छ ।
गुल्मीमा जीप दुर्घटना, ७ जना घाइते
गुल्मी, मंसिर २६ –गुल्मीको गुल्मी दरवार गाउँपालिका १ अन्र्तगत बलिथुममा जीप दुर्घटना हुँदा सात जना घाइते भएका छन् ।
समानुपातिकतर्फ आफ्नै जिल्लामा भट्टराईको पार्टी तेस्रो
गोरखा, मंसिर २६ –हालै सम्पन्न चुनावमा देशभरबाट उत्साहजनक परिणाम ल्याउन नसकेको नेपाली कांग्रेस समानुपातिकतर्फ भने गोरखामा पहिलो भएको छ ।
सर्लाही ४ मा ‘राजपा–वाम गठबन्धन’का उम्मेदवारलाई हराए अमरेशले
सर्लाही, मंसिर २६ –सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांगे्रसका डाक्टर अमरेशकुमार सिंह विजयी हुनुभएको छ ।
कैलाली, मंसिर २६ –कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोपी रेशम चौधरीलाई स्वयम उपस्थित भए मात्रै प्रमाण पत्र दिइने भएको छ ।
सोलुखुम्बुमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेस पहिलो
सोलुखुम्बु, मंसिर २६ –सोलुखुम्बुमा पत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनसँग पराजित हुन पुगेको कांग्रेस समानुपातिकतर्फ पहिलो पार्टी बनेको छ ।
पाल्पामा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो, विवेकशील चौथो स्थानमा
पाल्पा, मंसिर २६ –पाल्पाका दुबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) समानुपातिकमा पनि पहिलो भएको छ ।
धनुषाबाट तीन बहालवाला मन्त्रीको हार
जनकपुर, मंसिर २६ गते – भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिभा र प्रदेशसभा चुनावमा वर्तमान सरकारका तीन मन्त्री धनुषामा पराजित भएका छन् ।
विदेश जान चाहनेलाई खाने बस्ने सुविधा सहित निःशुल्क सीप तालिम लिने अवसर
काठमाडौं, मंसिर २६ – १९ देखि ३५ वर्षभित्रका, ५ कक्षासम्म पढेका, रोजगारीका लागि विदेश जान पासपोर्ट बनाएका र स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘फिट’ भएकाले निःशुल्क रुपमा तालिम लिन पाउनेछन् ।
कडा सुरक्षाका बीच सर्लाही ४ को मतगणना जारी
सर्लाही, मंसिर २६ –प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ सर्लाही क्षेत्र नं. ४ मा मतगणना भैरहेको छ । आइतार रातिदेखि रोकिएको मतगणना मंगलबार बिहानदेखि कडा सुरक्षाका बीच सूरु भएको हो ।
रामेछापमा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो पार्टी
रामेछाप, २६ मंसिर –मंसिर १० गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव अन्तर्गत समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको छ ।
गच्छदार र चौधरीको प्रतिष्पर्धा रहेको सुनसरीमा विवादकाबिच मतगणना सुरु
सुनसरी, मंसिर २६ गते – सोमबारदेखि स्थगित भएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३को मतगणना सुरु भएको छ । अर्धकट्टीसहित भेटिएको नौ वटा मतपत्र यथावत राखेर मतगणना सुरु गर्न आयोगले निर्देशन दिएपछि मतगणना सुरु भएको हो ।
स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा क मा एमाले विजयी
स्याङ्जा, मंसिर २६– आइतबारबाट मतगणना सुरु भएको स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा क मा एमालेका मोहनप्रसाद रेग्मी विजयी हुनुभएको छ ।
बाँदरमुढे घटना : प्रचण्डले त माफी मागे, माडीबासीले माफी दिए त !?
काठमाडौं, मंसिर २६ –पात्रोको पाना पल्टिँदै जाँदा घाउमा खाटा बस्छन् र हराउँछन् खाटाको आकार पनि । भुल्दै जानु मान्छेको बानी हो । यही बानीले दिएको छ मान्छे अघि बढ्ने आँट, पीडाबाट माथि उठ्ने र नयाँ दैनिकी सुरु गर्ने शक्ति पनि ।
स्याङ्जाको प्रदेशसभा १ ख मा एमालेका मिनप्रसाद गुरुङ विजयी
स्याङ्जा, मंसिर २६– स्याङ्जाको प्रदेशसभा १ ख मा नेकपा एमालेका मिनप्रसाद गुरुङ विजयी हुनुभएको छ ।
चन्द्र भण्डारीले चुनाव किन हारे ?
गुल्मी, मंसिर २६ – नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले प्रतिनिधिसभा चुनावमा गुल्मी क्षेत्र नं. १ बाट हार व्यहोर्नु परेको छ । उहाँलाई नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले हराउनुभएको हो । संविधानसभा चुनावमा ज्ञवालीलाई पराजित गरेका भण्डारीले यसपाली नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नु भएन ।
गुल्मीमा समानुपातिक तर्फ एमाले अगाडि
गुल्मी, मंसिर २६ – गुल्मीमा समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिएको छ । एमालले कुल ६० हजार ६२ मत ल्याएर पहिलो बनेको छ । नेपाली काँग्रेसले कुल ४५ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएको छ । माओवादीले ९ हजार ३ सय ८० मत ल्याएको छ ।
कैलाली, मंसिर २६ – प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फ कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा मतगणना चलिरहेको छ । विवाद समाधान भएपछि रोकिएको मतगणना चलिरहेको हो ।
सुनसरी ३ को रोकिएको मतगणना शुरु
सुनसरी,मंसिर २६ गते – सोमबारदेखि स्थागीत भएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३को मतगणना सुरु भएको छ । अर्धकट्टी सहित भेटिएको नौ वटा मतपत्र यथावत राखेर मतगणना शुरु गर्न आयोगले निर्देशन दिएपछि सुनसरी ३ मा मतगणना शूर भएको हो ।
कमल पंगेनीले हार पछि प्रतिद्वन्द्वीलाई दिए शुभकामना
स्याङ्जा, मंसिर २६ – स्याङ्जाको क्षेत्र नं. १ को क का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कमल पंगेनी साढे २ हजार भन्दा धेरै मतले पराजित हुनुभएको छ ।
सुनसरी क्षेत्र नं ३ मा रोकिएको मतगणना तत्काल सुरु गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन
सुनसरी,मंसिर २६ गते – हिजोबाट स्थागीत भएको सुनसरी क्षेत्र नं. ३ को मतगणना तत्काल शुरु गर्नु निर्वाचनआयोगले निर्देशन दिएको छ ।
स्याङ्जा प्रदेशसभा क मा वाम गठबन्धनले जित्यो
स्याङ्जा, मंसिर २६ – स्याङ्जाको क्षेत्र नं १ प्रदेशसभाको क मा वाम गठबन्धनका दिपक थापा विजयी हुनुभएको छ । थापाले १७ हजार ३९२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
समानुपातिकमा ३ दलले मात्र कटाए ३ प्रतिशत, विवेकशील साझा र राप्रपा संकटमा
काठमाडौं, मंसिर २६ – प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट जितेको नेकपा एमालेले समानुपातिकमा पनि अग्रता बनाएको छ । देशभरिबाट अहिलेसम्म साढे २८ लाख मत गणना हुँदा नेकपा एमालेले साढे १० लाख मत पाएको छ ।
टिकापुर घटनापछिको सेन्टिमेन्टको मतले ‘मोस्ट वान्टेड’ रेशमलाई जितायो
धनगढी, मंसिर २६ – कैलाली क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभामा प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचिमा रहेका रेशम चौधरी विजयी हुनुभएको छ ।
सर्लाही क्षेत्र नं. ४ को मतगणना अझै सूरु हुन सकेन
सर्लाही, मंसिर २६ – सर्लाही क्षेत्र नं. ४ को मतगणना अझै सूरु हुन सकेन । दलका प्रतिनिधि बीचको विवादले आइतबार राती १० बजेदेखि मतगणना रोकिएको छ ।
मोस्ट वान्टेड सूचिमा रहेका चौधरी २० हजार भन्दा बढी मतले विजयी
कैलाली, मंसिर २६ – कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचिमा रहेका रेशमलाल चौधरी विजयी हुनुभएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवार चौधरीले ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याउँदै विजयी हुनुभएको हो ।
कर्मचारीलाई शौचालयमा थुन्नेले पनि चुनाव जिते
धनुषा, मंसिर २६ – प्रतिनिधिसभातर्फ धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा मातृकाप्रसाद यादव विजयी हुनुभएको छ ।
कञ्चनपुर ३ मा २५८, ६३ र १६१ मतले हारे कांग्रेसका उम्मेदवार
कञ्चनपुर, मंसिर २६ – कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा झिनो मतअन्तरले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । एमालेका दीपकप्रकाश भट्ट नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकलाई २ सय ५८ ले पछि पार्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यामा विजयी हुनुभएको हो ।
काठमाडौं, मंसिर २० – चुनावको नयाँ नतिजा आइसकेपछि कामचलाउ बनेको सरकारले केही विवादित निर्णय गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा निर्णय थियो ‘चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेल नियुक्त’ ।
सप्तरीमा खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने १२ जना पक्राउ
सप्तरी, मंसिर २५ – सप्तरीमा खुला ठाउँमा दिसा गर्ने १२ जना भन्दा धेरै व्यक्ति पक्राउ परेका छन । सन् २०१७ सम्म जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्ने अभियानलाई चुनौती दिँदै खुल्ला शौच गर्ने ब्यक्तिहरुलाई स्थानीयबासीले पक्राउ गरेर सामाजिक सजाय गर्न थालेका छन् ।
समानुपातिकतर्फ म्याग्दीमा एमाले पहिलो पार्टी
म्याग्दी, मंसिर २५ – म्याग्दीमा समानुपातिकतर्फको पनि मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमालेले १८ हजार २ सय ६६ मत पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले १७ हजार २ सय ४८ र नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ हजार ३३ मत पाएका छन् ।
पर्सामा वाम गठबन्धन निल, १२ सिटमध्ये १ सिटमा मात्रै दोश्रो
पर्सा, मंसिर २५ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा देशभरी उत्साहजनक परिणाम ल्याएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन पर्सामा भने बढारिएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २५ – राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका ६ सदस्य नै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १० – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान संशोधन नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
​सीप सिक्दै कैदीबन्दी
​विराटनगरबाट बुद्ध एयरले पहिलो उडान गर्नेे
​सांसद विकास कोषको बजेट किर्ते योजनामा खर्च !
विदेशमा फाँसी कुरेका सन्तानलाई पर्खने बाआमाका कथा
एउटै गोलीले सबै चरा मार्छु भन्दा नमर्न पनि सक्छ : बाबुराम भट्टराई
७ प्रदेशका २ विमानस्थल कालोपत्रे हुँदै, अछाममा परीक्षण उडानको तयारी